Ramba Uchifungisisa Zvinhu Zvokunamata | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Acholi Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuvash Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Kikamba Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Korean Krio Latvian Lhukonzo Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Marathi Maya Mixe Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuRussia Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Yoruba Zande Zapotec (Isthmus)
“Fungisisa zvinhu izvi; nyura mazviri, kuti kufambira mberi kwako kuonekwe nevanhu vose.”—1 TIM. 4:15.
Kufungisisa kuita sei?
Ndezvipi zvimwe zvinhu zvakanaka zvatingafungisisa nezvazvo?
Kufungisisa Shoko raMwari zuva nezuva kunotibatsira sei?
1, 2. Chii chinotisiyanisa nemhuka?
UROPI hwedu hunoshamisa chaizvo. Ndihwo hunoita kuti tikwanise kudzidza mutauro. Uye mutauro ndiwo unoita kuti tikwanise kuverenga, kunyora, kutaura, kunzwisisa zvinenge zvataurwa, kunyengetera, uye kuimba nziyo dzokurumbidza Jehovha. Zvose izvi zvinotisiyanisa nemhuka. Masayendisiti haasati ava kunyatsonzwisisa kuti uropi hwedu hunokwanisa sei kuita izvozvo. Mumwe purofesa anoongorora nezvemitauro akati: “Kukwanisa kunoita vana kudzidza mutauro ndechimwe chinhu chinoratidza kuti vanhu vakasiyana nezvimwe zvinhu zvakasikwa.”
2 Mwari ndiye akatipa chipo chokutaura. (Pis. 139:14; Zvak. 4:11) Asi anewo chimwe chipo chaakatipa chinotisiyanisa nemhuka. Akatisika “nomufananidzo” wake. Tine rusununguko rwokusarudza uye tinogona kushandisa chipo chatiinacho chokutaura kuti tirumbidze Mwari.—Gen. 1:27.
3. Chipo chipi chatakapiwa naJehovha chinoita kuti tive vakachenjera?
3 Mwari akapa vanhu vose vanoda kumukudza chimwewo chipo chakakura. Chipo ichocho iBhaibheri. Bhaibheri rose kana kuti zvikamu zvaro, rinowanika mumitauro inopfuura 2 800. Paunodzidza zviri muBhaibheri, unenge uchizadza pfungwa dzako nemafungiro aMwari. (Pis. 40:5; 92:5; 139:17) Izvozvo zvichaita kuti ufungisise zvinhu zvinoita kuti “uve akachenjera kuti uwane ruponeso.”—Verenga 2 Timoti 3:14-17.
4. Kufungisisa kuita sei, uye mibvunzo ipi yatichakurukura?
4 Kufungisisa kuisa pfungwa pane chimwe chinhu wofunga zvakadzama nezvechinhu ichocho, chingava chakanaka kana kuti chakaipa. (Pis. 77:12; Zvir. 24:1, 2) Tinobatsirwa chaizvo kana tikafungisisa zvatinodzidza pamusoro paJehovha Mwari neMwanakomana wake Jesu Kristu. (Joh. 17:3) Asi kuverenga uye kufungisisa zvakabatana papi? Zvinhu zvipi zvatingafungisisa nezvazvo? Tingaita sei kuti tigare tichifungisisa uye kuti kufungisisa kuve chinhu chatinofarira kuita?
ITA KUTI KUDZIDZA KWAKO KUKUBATSIRE
5, 6. Chii chichakubatsira kuti unyatsonzwisisa uye uyeuke zvaunenge uchiverenga?
5 Uropi hwedu hunogona kuita zvinhu zvinoshamisa, uye zvimwe zvacho hazvitombodi hazvo kuti tifunge. Somuenzaniso, tinoita zvinhu zvakadai sokufema, kufamba, kana kuchovha bhasikoro tisingatombofungi. Dzimwe nguva izvi zvinogona kuitikawo patinenge tichiverenga. Saka zvinokosha kuti tiise pfungwa pane zvatinenge tichiverenga toona kuti zvinorevei. Paunopedza kuverenga ndima kana kuti usati waenda pane kamwe kamusoro mubhuku raunenge uchiverenga, unogona kumbomira wofungisisa zvaunenge uchangobva kuverenga kuti uve nechokwadi chokuti wanyatsonzwisisa. Asi unogona kuvhiringidzwa nezvimwe zvinhu uye pfungwa dzako dzinogona kubva pane zvauri kuverenga, zvoita kuti kuverenga kwako kushaye zvakunobatsira. Chii chingakubatsira kuti usatsauswa?
6 Masayendisiti akaona kuti zviri nyore kuyeuka chimwe chinhu kana ukaita zvokutodudza mashoko paunenge uchidzidza. Musiki wouropi hwedu anoziva izvozvo. Ndokusaka akarayira Joshua kuti averenge bhuku roMutemo “nenzwi riri pasi.” (Verenga Joshua 1:8.) Kuverenga Bhaibheri nenzwi riri pasi kuchaita kuti zvaunoverenga zvinyatsopinda mupfungwa. Kuchakubatsirawo kuti uise pfungwa dzako pane zvaunenge uchiverenga.
7. Inguva ipi yakanaka yokufungisisa Shoko raMwari? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)
7 Kuverenga kuri nyore, asi kufungisisa ibasa chairo rinotoda kuti munhu aise pfungwa pane zvaanenge achidzidza. Ndokusaka pfungwa dzedu isu vanhu vane chivi dzichingoda kuita zvinhu zviri nyore zvisingadi kunyanya kushandisa pfungwa. Saka nguva yakanaka yokufungisisa ndeiya yokuti unenge usina kuneta, uri panzvimbo yakanyarara isina zvinokutsausa. Munyori wepisarema akaona kuti nguva yousiku ndiyo yainge yakamunakira kuti afungisise. (Pis. 63:6) Jesu uyo aiva nepfungwa dzisina kukanganiswa nechivi, aitoziva kuti zvinobatsira kufungisisa uye kunyengetera uri panzvimbo yakanyarara.—Ruka 6:12.
ZVINHU ZVAKANAKA ZVOKUFUNGISISA NEZVAZVO
8. (a) Chii chimwe chatingafungisisa nezvacho? (b) Jehovha anonzwa sei patinotaura nevamwe nezvake?
8 Kufungisisa zvaunoverenga muBhaibheri kunokosha chaizvo, asi panewo zvimwe zvaunogona kufungisisa nezvazvo. Somuenzaniso, paunoona chimwe chinhu chakasikwa chinokushamisa, imbomira wofungisisa nezvacho. Izvi zvichaita kuti urumbidze Jehovha nokuda kwokunaka kwake uye zvichaitawo kuti ude kuudzawo vamwe manzwiro aunoita. (Pis. 104:24; Mab. 14:17) Jehovha anonzwa sei patinonyengetera tichimurumbidza uye patinotaura nevamwe nezvake? Bhaibheri richitaura nezvemazuva ano okupedzisira rinoti: “Panguva iyoyo vaya vaitya Jehovha vakataurirana, mumwe nomumwe neshamwari yake, Jehovha akaramba akateerera uye achinzwa. Bhuku rokuyeuchidza rakatanga kunyorwa pamberi pake nokuda kwevaya vanotya Jehovha nevaya [vanofungisisa] nezvezita rake.”—Mar. 3:16.
Unofungisisawo here nezvokuti ungabatsira sei vanhu vaunodzidza navo Bhaibheri? (Ona ndima 9)
9. (a) Pauro akaudza Timoti kuti afungisise nezvei? (b) Tingashandisa sei zano raPauro patinenge tichigadzirira kuita basa rokuparidza?
9 Muapostora Pauro akaudza Timoti kuti ‘afungisise’ kuti mashoko ake, mufambiro wake uye zvaaidzidzisa zvaizobatsira sei vamwe. (Verenga 1 Timoti 4:12-16.) Kungofanana naTimoti, isuwo tine zvinhu zvokunamata zvakawanda zvatinogona kufungisisa nezvazvo. Somuenzaniso, tinoda kuzvipa nguva yokufungisisa patinenge tichigadzirira kuzodzidza nemumwe munhu Bhaibheri. Funga nezvemudzidzi mumwe nomumwe, woona kuti mubvunzo upi kana kuti muenzaniso upi uchamubatsira kuti afambire mberi. Kana tikagadzirira seizvi patinenge tichida kudzidza nemunhu Bhaibheri, tichasimbisa kutenda kwedu uye tichanakidzwa nokudzidzisa vanhu Bhaibheri uye tichava vadzidzisi veShoko raMwari vakanaka. Tinobatsirwawo kana tikagadzirira mwoyo wedu tisati taenda mubasa romumunda. (Verenga Ezra 7:10.) Kuverenga chitsauko chimwe chete mubhuku reBhaibheri raMabasa, ‘kuchakuchidzira’ chido chedu chokuita ushumiri. Kufungisisa ndima dzomuBhaibheri dzatinenge tichida kushandisa musi iwoyo uye mabhuku atinenge tichironga kupa vanhu, kuchatibatsira kuti tinyatsoita basa redu. (2 Tim. 1:6) Funga nezvevanhu vari mundima yenyu uye kuti zvii zvavangafarira. Kana tikagadzirira saizvozvo, tichabudirira kuparidza ‘tichiratidza simba’ rine Shoko raMwari.—1 VaK. 2:4.
10. Ndezvipi zvimwe zvinhu zvakanaka zvatingafungisisa nezvazvo?
10 Unombonyora manotsi here panenge pachipiwa hurukuro dzavose, kana kuti pamagungano? Kumbowana nguva yokuverenga manotsi iwayo kunokupa mukana wokufungisisa zvinhu zvawakadzidza muShoko raMwari uye zvawakadzidziswa nesangano rake. Uyewo, pose panobuda magazini eNharireyomurindi neMukai! uye mabhuku anobudiswa pamagungano, tinova nezvinhu zvitsva zvokuverenga uye zvokufungisisa. Paunenge uchiverenga imwe nyaya iri muBhuku Regore, zvakanakawo kuti umbomira usati watanga kuverenga imwe. Izvozvo zvichakupa mukana wokufungisisa zvaunoverenga uye kuti nyaya yacho inyatsosvika pamwoyo. Zvinobatsirawo kutara pfungwa huru kana kuti kunyora manotsi mashoma kumucheto kwebhuku. Manotsi iwayo anogona kuzokubatsira paunenge uchigadzirira kunoona munhu anenge afarira, kunofudza mumwe munhu kana kuti uchigadzirira hurukuro. Chimwe chakatonyanya kunakira kumbomira uye kufungisisa paunenge uchiverenga mabhuku edu ndechokuti zvaunodzidza zvinonyatsopinda mupfungwa, uye uchawana mukana wokunyengetera kuna Jehovha uchimutenda nezvinhu zvakanaka zvauri kudzidza.
FUNGISISA SHOKO RAMWARI ZUVA NEZUVA
11. Chii chatinofanira kunyanya kufungisisa nezvacho, uye nei? (Onawo mashoko omuzasi.)
11 Shoko raMwari rakafemerwa ndiro ratinofanira kunyanya kufungisisa nezvaro. Asi ngatitii warambidzwa kuva neBhaibheri. * Ungaitei pakadaro? Hapana anogona kukutadzisa kufungisisa zvinhu zvawakachengeta mupfungwa dzako zvakadai semagwaro aunofarira uye mashoko enziyo dzoUmambo. (Mab. 16:25) Uye mudzimu waMwari unogona kukubatsira kuyeuka zvinhu zvakanaka zvawakadzidza.—Joh. 14:26.
12. Ndeapi mamwe marongero aungaita purogiramu yako yokuverenga Bhaibheri zuva nezuva?
12 Unogona kuronga kuti mamwe mazuva uverenge uye ufungisise chikamu cheBhaibheri chinenge chichiverengwa vhiki iyoyo paChikoro chaMwari Choushumiri. Mamwe mazuva unogona kufungisisa zvakataurwa naJesu uye zvaakaita. Handizvo here kuti mabhuku eBhaibheri anonyanya kuzivikanwa nevanhu inhoroondo dzeEvhangeri dzinotaura nezveupenyu uye ushumiri hwaJesu? (VaR. 10:17; VaH. 12:2; 1 Pet. 2:21) Tinewo bhuku rinoronga zvaiitika muupenyu hwaJesu paaiva panyika uye zviitiko zvacho zvakarongwa maererano nokutevedzana kwazvo. Bhuku iri rinobatsira chaizvo kunyanya kana tikaverenga uye tikafungisisa ndima dzeEvhangeri dzinenge dzakanyorwa muchitsauko chimwe nechimwe.—Joh. 14:6.
NEI KUFUNGISISA KUCHIKOSHA CHAIZVO?
13, 14. Nei zvichikosha chaizvo kuti tirambe tichifungisisa zvinhu zvokunamata, uye izvozvo zvichaita kuti tiitei?
13 Kufungisisa zvinhu zvokunamata kunobatsira muKristu kuti asimbise ushamwari hwake naJehovha. (VaH. 5:14; 6:1) Munhu asingagari achifungisisa nezvaJehovha naJesu haagoni kuramba aine kutenda kwakasimba. Zviri nyore kuti munhu akadaro akukurwe kana kuti apedzisire abva pachokwadi. (VaH. 2:1; 3:12) Jesu akanyevera kuti kana tikasanzwa kana kuti tikasagamuchira Shoko raMwari “nomwoyo wakarurama uye wakanaka,” hatigoni ‘kurichengeta.’ Zviri nyore kuti ‘titsauswe nokuzvidya mwoyo uye pfuma nemafaro zvoupenyu huno.’—Ruka 8:14, 15.
14 Saka ngatirambei tichifungisisa Shoko raMwari. Izvi zvichaita kuti tide kuratidza kubwinya kwaJehovha uye titevedzere unhu hwake hunotaurwa muBhaibheri. (2 VaK. 3:18) Tinogona kuramba tichidzidza nezvaBaba vedu vokudenga uye tichivatevedzera nokusingagumi. Hakuna imwe ropafadzo inopfuura iyoyo!—Mup. 3:11.
15, 16. (a) Kufungisisa zvinhu zvokunamata kunotibatsira sei? (b) Nei dzimwe nguva zvisiri nyore kufungisisa, asi nei tichifanira kuramba tichiedza?
15 Kuramba tichifungisisa zvinhu zvokunamata, kuchaitawo kuti tirambe tichikoshesa chokwadi. Izvi zvichaita kuti tikurudzire hama dzedu uye vanhu vanofarira vatinoona muushumiri. Kufungisisa nezvechipo chikuru chatakapiwa naMwari chechibayiro chorudzikinuro chaJesu kuchatibatsira kuti tikoshese ropafadzo yatinayo yokuva neukama hwepedyo naBaba vedu Vatsvene, Jehovha. (VaR. 3:24; Jak. 4:8) Imwe hama yokuSouth Africa inonzi Mark iyo yakapedza makore matatu iri mujeri nemhaka yekusapindira mune zvenyika yakati: “Kufungisisa kwakafanana nerwendo runonakidza uchienda kunzvimbo yausati wamboenda. Patinoramba tichifungisisa zvinhu zvokunamata, tinorambawo tichidzidza zvinhu zvitsva nezvaMwari wedu, Jehovha. Dzimwe nguva pandinenge ndiine zviri kundinetsa kana kuti ndichizvidya mwoyo nezveramangwana, ndinoverenga Bhaibheri ndotanga kufungisisa Rugwaro rwandinenge ndaverenga. Pfungwa dzangu dzinobva dzagadzikana.”
16 Upenyu munyika ino hwakazara nezvinhu zvinotsausa zvokuti dzimwe nguva zvakaoma chaizvo kufungisisa zvinhu zvokunamata. Imwe hama yomuAfrica inonzi Patrick yakati: “Ndinogona kufananidza zvinhu zviri mupfungwa dzangu nemameseji anenge akazara mufoni. Mamwe acho anokosha asi mamwe acho haakoshi. Saka ndinenge ndichifanira kudzima aya asina basa ndosara neanokosha. Pandinenge ndichiongorora zviri mupfungwa dzangu, ndinowanzowana ‘pfungwa dzinondinetsa,’ uye ndinobva ndanyengetera kuna Jehovha kuti ndikwanise kufungisisa ndisina zviri kundivhiringa. Izvi zvinogona kumbonditorera kanguva ndisati ndatanga kufungisisa, asi zvinondibatsira kuti ndinzwe ndiri pedyo naJehovha. Pfungwa dzangu dzinobva dzavhurika zvokuti ndinokwanisa kunyatsonzwisisa chokwadi.” (Pis. 94:19) Saka zviri pachena kuti munhu wose ‘anoongorora Magwaro zuva nezuva’ uye anofungisisa zvaanenge achidzidza, anobatsirwa chaizvo.—Mab. 17:11.
UNOITA SEI KUTI UWANE NGUVA YACHO?
17. Unoita sei kuti uwane nguva yokufungisisa?
17 Vamwe vanomuka mangwanani-ngwanani kuti vaverenge, vafungisise uye kuti vanyengetere. Vamwe vanowana nguva pavanombozorora vari kubasa. Unogona kuwana mukana wacho manheru kana kuti wava kuda kurara. Vamwe vanoverenga Bhaibheri mangwanani, vozoverengazve vava kuda kurara. Saka ‘vanoriverenga masikati nousiku,’ kureva kuti nguva dzose. (Josh. 1:8) Chinokosha ndechokuti urege zvimwe zvinhu zvisingakoshi wowana nguva yokufungisisa Shoko raMwari.—VaEf. 5:15, 16.
18. Bhaibheri rinotii nezvevanhu vose vanofungisisa Shoko raMwari zuva nezuva uye vanoedza kushandisa zvavanodzidza?
18 MuBhaibheri mune magwaro akawanda anotaura nezvemakomborero achawanikwa nevanhu vose vanofungisisa Shoko raMwari uye vanoedza kuita zvavanodzidza. (Verenga Pisarema 1:1-3.) Jesu akati: “Vanofara vaya vanonzwa shoko raMwari vachirichengeta!” (Ruka 11:28) Chinokosha kupfuura zvose ndechokuti kufungisisa zvinhu zvokunamata zuva nezuva kuchaita kuti tikudze Musiki wedu Mukuru akatipa pfungwa dzinoshamisa. Jehovha achaita kuti tifare iye zvino uye achatipa upenyu husingaperi munyika itsva yake yakarurama.—Jak. 1:25; Zvak. 1:3.
^ ndima 11 Ona nyaya inoti “Kurwa Kwedu Kwokuti Tirambe Takasimba Pakunamata,” iri muNharireyomurindi yaDecember 1, 2006.